Xavi Oo Noqon Doona Tabaraha Kooxda Barcelona Hadii Doorashada Madaxweyne Ku Guuleysto Victor Font.
HomeHoryaalka SpainXavi oo noqon doona tabaraha kooxda Barcelona hadii doorashada Madaxweyne ku guuleysto Victor Font.
Iyadoo maalmihii sharafta lahaa ee Barcelona ay si dhakhso leh u noqdeen xusuus sii yaraanaya, rajada madaxweyne ee Victor Font ayaa aaminsan in soo jiidashada ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe Xavi Hernandez inuu ku soo laabto kooxda inay u horseedi doonto Catalans taariikh dahabi ah. Xavi, oo ka mid ah nashqadeeyayaashii Barca ee tobanka sano ee ay xukumaysay kubada cagta adduunka, waa tababaraha kooxda reer Qatar ee Al Sadd laakiin wuxuu ogolaaday inuu door hoggaamineed la ciyaaro Barca haddii Font uu ku guuleysto doorashada kooxda ee Jan 24.
Inkastoo Font uu rajeynayo inuu arko Xavi oo ku sugan barxada Barca, hadana wuxuu si isku mid ah ugu qanacsan yahay doorka fog ee uu ciyaari karo
“Waxaan go’aansanay sanado ka hor qofka ugu fiican ee naga caawin kara dhismaha ururkeena waa Xavi,” Font ayaa wareysi uu siiyay Reuters ku yiri.
“Xaqiiqdii waxaan uheysan karnaa Xavi maamule guud sanado badan sida Alex Ferguson u joogay Manchester United. Laakiin haddii uu u baahan yahay inuu ciyaaro kaalin kale, wuu noqon karaa qof dabacsan. Dad yarkan ayaa leh astaamaha hoggaamineed . ”
Ferguson waa tababaraha ugu guulaha badan kubada cagta Ingariiska, isagoo ku guuleystay 49 koob intii uu ku guda jiray 39 sano ee xirfadiisa tababarnimo, oo ay ku jirto 38 Manchester United
Font ayaa sidoo kale go’aansaday in Xavi uu sii joogo Barca sanado badan isla markaana uusan khibradiisa u dhoofin kooxaha ka soo horjeeda ee Yurub.
“Waxaan u sheegay Xavi ma awoodi karno inaan helno kiis kale oo la mid ah Pep Guardiola,” Font ayaa sidaas yidhi.
“Pep wuxuu kooxda sifiican u soo tababaray sanado yar kadib waa ka tagay kooxda wuxuuna aaday tartanka Bundesliga (Bayern Munich ka dibna Manchester City). Waxaan u baahanahay inaan Xavi kooxda ku heyno 10ka sano ee soo socota. ”
Qorshaha Font ee Xavi si uu u kormeero horumarka kooxda micnaheedu maahan imaatinkiisa inuu ka khatarsan yahay tababaraha haatan ee Ronald Koeman.